Synwin Springt Mattress Mugadziri | Muhomwe chitubu chematuru
Kuenderera mberi chitubu mattress
Muhomwe chitubu chematuru
Bonnell chitubu chematuru
Govera kumusoro mattress
15cm rova ​​kumusoro mattress
20cm rova ​​kumusoro mattress
25cm rova ​​kumusoro mattress
5 Star Hotera Mattress
4 Star Hotera Mattress
3 Star Hotera Mattress
Zvakajairika Foam Mattress
Kurara Chiitiko Center
Imba yega yega
Metiresi Purchase Guide
Synwin mattress fekitori inonyanya kuburitsa matiresi yechirimo, homwe chitubu metiresi uyebonnell chitubu metiresi muChina. Sei kusarudza isu.
15 YEARS MATTRES PRODUCTION ①
15 makore ruzivo mukugadzira matiresi uye matiresi accessories.
30000PCS KUBVA PAMWEDZI ③
30000 pcs pamwedzi kubuda, kugadzikana kwekupa, nekukurumidza kuburitsa
Synwin mattress pamusoro pemakore gumi nemana ruzivo kutumira kunze kwenyika kutenderera pasirese, kupinda gore rega rega zvakanaka seCanton Fair, CIFF fenicha yakanaka,
② 70% RAW MATERIAL YAKITWA NESU
70% mbishi zvinhu zvakagadzirwa nesu, kunyanya kwemakore makumi matatu nemaviri ruzivo muchirimo system
④ 80000 M2 KUGADZIRA NZVIMBO
Fekitori yedu ine anopfuura 80000 mativi emamita, simbisa metiresi pamwedzi yakagadzikana kuwanikwa.
⑥ ODM UYE OEM
Ipa ODM uye OEM chirongwa uye imwe yekumira sevhisi.
Range Of Premium Zvigadzirwa
SenyanzviChina mugadziri wematiresi, Synwin, inopacustom metiresi, homwe chitubu metiresi, bonnell chitubu metiresi,inoenderera mberi chitubu metiresinezvimwewo.
Synwin, inyanzvi metiresi vatengesi - Metiresi yedu inoshandiswa zvakanyanya kuzvitoro zvezvitoro, masupamaketi, mutengesi, muparadzi uye mapurojekiti ehotera dzenyeredzi nezvimwe.
100% Fekitori yakananga kutengesa-Hapana pakati anoita mutsauko, chengetedza yakawanda mutengo, uye kukubatsira iwe kuwana yakawanda yemakwikwi mutengo.
15 makore garandi yechirimo system, Kupfuura kunyaradza. Kurara kwakanaka kunotanga nemetiresi chaiyo.
Yemahara dhizaini mufananidzo wepamhepo mutengi, Inobatsira iwe nekukurumidza kushambadzira.
RSB-PT23, Bonnell chitubu pamba shandisa piro pamusoro
RSP-BT26, Pocket spring roll mubhokisi
RSB-R22 Gonhora kumusoro bonnell chitubu pamhepo metiresi
RSP-ETL28 Natural latex hotera muhomwe chitubu
RSB-2BT Maviri emativi anoshandisa latex+memory foam hotera metiresi
RSP-2S Economic yepamhepo ODM chitubu metiresi
RSB-B21 Roll in box tight top two side shandisa metiresi
2000$USD discount ye40HQ, tumira kubvunza Ikozvino!
Synwin springmugadziri wematiresi , kubvira 2007, iri muFoshan, China. Takatengeswa kunze kwenyika mattresses anopfuura makore gumi nemashanu. Kudacustom metiresi,chitubu metiresi,bonnell chitubu metiresi,homwe chitubu metiresi uye metiresi yehotera nezvimwe. Panguva imwe, setsikavatengesi vematiresi, isu hatigone chete kukupa iyo tsika saizi metiresi kwauri, asi zvakare tinokwanisa kukurudzira yakakurumbira maitiro maererano nekushambadzira kwedu ruzivo. Metiresi yedu inoshandiswa zvakanyanya kune vatengesi, zvitoro zvevatengesi, masupamaketi, vatengi vepamhepo uye mamwe emapurojekiti ehotera nezvimwe.
Isu tinozvipira kuvandudza bhizinesi rako rematiresi. Ngatibatanei mumusika pamwe chete. Synwin metiresi inoramba ichienda kumberi mumusika wemakwikwi. Tinogona kupa OEM/ODM metiresi sevhisi kune vatengi vedu, ese mattresses edu chitubu anogona kugara kwemakore gumi nemashanu uye kwete kudzika.
2021 New Pocket coil Metiresi iri kuuya
New pillow top mattress buritsa
Rongedza neRoll up muchina
3zones homwe chitubu musimboti mudura
Semuchina wemakore gumi nemashanu anogadzira metiresi, Synwin yanga ichipa vatengi vepasirese mhando yakanakisa pamutengo wefekitori wemakwikwi,
Vatengesi veSynwin mattress vakapihwa hukama hwepamusoro kubva kune vatengi vematiresi avo kubva mukati nekunze. Isu tinogashira tsika metiresi, chero saizi, chero bhajeti, chero pateni iripo. Synwin Kugovera zvinhu kune yepamba Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland uye mamwe ane mukurumbira mabhureki epasirese kweanopfuura makore mana. mhando yechigadzirwa inonyanya kuzivikanwa nevatengi vedu.
Pamusoro 100 Global Retailers
Zvitoro Zvefenicha Zvepamusoro uye Zvitoro zveMatiresi
Online Shopping Webhusaiti
Synwin inogona kugadzira metiresi yakasarudzika, homwe chitubu metiresi, bonnell chitubu metiresi uye inoenderera mberi chitubu metiresi,hotera metiresi etc. Pano kukupa iwe yedumugadziri wematiresi nhau dzekambani, metiresi nyowani dhizaini, patani nyowani, uyevatengesi vematiresi ruzivo rutsva. Pano, iwe unogona chaizvo kuona yedu fekitori sumo, tsika yekambani, timu yekutengesa, uye chaiyo chigadzirwa shots.
Ingoverenga miniti kuti uwane kunzwisisa nekukurumidza kweSynwin!
Chii chinonzi spring metiresi?
Vamwe vanotenga mazano ematiresi
Ndeipi metiresi inonyanya kukodzera kuti vana varare?
Nzira yekusarudza sei muhomwe spring mattress?
TAURA NESU ZVINO,
ZVICHIDA TINOGONA KUBATSIRA!
Mudiwa, ndichapindura mumaawa gumi nemaviri. Meseji yako yese inodzivirirwa!
Tiwane paalibaba: swmattress.en.alibaba.com.
Roll Up Matiresi
Udza: +86-757-85519362/ +86 -757-85519325
Wedzera: NO.39Xingye Road, Ganglian Industrial Zone, Lishui, Nanhai Distirct, Foshan, Guangdong, P.R.China
BETTER BATA BHUSINESS ARInani
Bata Kutengesa kuSYNWIN.